एक युवकका ८ पत्नी, यसरी मिलेर बसेका छन् एउटै घरमा! (भिडिओ) - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com एक युवकका ८ पत्नी, यसरी मिलेर बसेका छन् एउटै घरमा! (भिडिओ) - खबर प्रवाह
एक युवकका ८ पत्नी, यसरी मिलेर बसेका छन् एउटै घरमा! (भिडिओ)
संसारमा अनौठा अनौठा घटना हुन्छन्। एक जनाको ८ पत्नी, त्यो पनि एउटै घरमा मिलेर बसेका छन् भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ। तर थाइल्यान्डमा एउटा यस्तै रोचक प्रेम र परिवार छ।
ओडिटी सेन्ट्रलमा प्रकाशित खबरअनुसार थाइल्यान्डमा ८ जना युवती एक ट्याटु आर्टिस्ट युवकको पत्नी भएर एकै घरमा बसेका छन्। ती युवकको नाम हो– ओङ डाम सोरेट। अझ रोचक कुरा त के छ भने यी ८ सौता आपसमा अहिलेसम्म झगडा गरेका छैनन्।
यसरी आठ पत्नी राखेकै कारण ती ट्याटु आर्टिस्ट युवक संसारभर चर्चामा छन्। गत हप्ता उनले थाइल्यान्डकै एक कमेडी टेलिभिजन च्यानललाई अन्तरवार्ता दिएका थिए। उनले आठै पत्नीसहित अन्तरवार्ता दिएका थिए। त्यसपछि उनीहरूप्रति विश्वको ध्यान तानिएको हो।
अन्तरवार्तामा उनले बताएअनुसार उनकी पहिली पत्नीको नाम नोङ स्प्राइट हो। उनीसँग एक साथीको बिहेमा भेट भएको हो। दोस्री श्रीमतीको नाम हो– नोङ एल। उनीसँग बजारमा भेट भएको हो। तेस्री पत्नी नोङ नेनसँग एक अस्पतालमा भेटे भएको उनले बताएका छन्।
चौथी, पाँचौं र छैटौं पत्नीसँग भने सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्क भएको हो। सातौं पत्नीसँग मन्दिरमा भेट भएको हो भने आठौं पत्नीसँगको भेटबारे उनले भनेका छन्, ‘म आफ्ना ४ पत्नी लिएर पटायामा बिदाको मजा लिइरहेको थिएँ। त्यहीँ नोङ (आठौं पत्नी) सँग भेट भयो। उनले पनि मेरी सहयात्री बन्ने निर्णय गरिन्। अन्य पत्नीलाई पनि कुनै आपत्ति भएन।’
रिपोर्टअनुसार सोरोतको अहिलेसम्म एउटा मात्र बच्चा भएका छन्। जुन सबैभन्दा जेठीबाट भएको हो। सोरेटका अनुसार अरू २ पत्नी गर्भवती छन्। घरमा ४ वटा बेडरुम छन् र हरेक बेडरुममा २ पत्नी सुत्छन्।
सोरेटकी पहिलो पत्नीले पतिलाई दोस्रो बिहे गर्न आफैंले अनुमति दिएको बताएकी छन्। उनका अन्य ७ श्रीमतीले पनि आफूहरूलाई सोरेट विवाहित हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रेम भएको र बिहे गरेको बताएका छन्। आफूहरू सबै हाँसीखुसी रहेको आठै पत्नीले बताएका छन्।
अर्काे गज्जबको कुरा के हो भनेले सोरेटले सबै पत्नीलाई अर्काे कुनै व्यक्ति मन परे वा ऊसँग प्रेम भए जाने स्वतन्त्रता दिएका छन्।
‘मैले सबै पत्नीलाई भनेको छु भविष्यमा उनीहरूलाई कुनै अर्काे व्यक्तिसँग प्रेम भयो भने नहिच्किचाई मलाई बताउनू। त्यसपछि म उनीहरूसँग तीनपटक सोध्नेछु– मलाई छाड्न चाहन्छौं’, सोरेटले भनेका छन्, ‘उनीहरूले छाड्न चाहेको जवाफ दिए भने म खुसीसाथ जाने अनुमति दिनेछु।’
आफ्नाबारे मानिसहरूले अनेक अनुमान गरेको उनी बताउँछन्। जस्तो : आफू धेरै धनी भएकाले ८/८ जना पत्नी राखेको होला भन्ने। तर उनी भन्छन्, ‘विश्वास गर्नुस्, म धनी छैन। हामी सबै काम गर्छौं र आफ्नो आवश्यकताअनुसार पैसा कमाउँछौं।’
सामाखुसीमा मेनपावर सञ्चालकबाट युट्युबर कुटिए
सरकारले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै निर्वाचन गर्नुपर्छ : प्रकाशमान सिंह